Nhau - Rockwell International inowana Allen Bradley
Rockwell anorondedzera kuti Rockwell, inotungamirwa muMilwaukee, Wisconsin, izana remakore zana indasitiri inoshandisa michina yemarudzi akawanda. Kuvandudzwa kwekambani mumakwikwi akadaro ane hutsinye kwawana mibairo mikuru, inoratidza simba rakasimba rekambani, hutano, uye kugona kwayo kucherechedza kumusika, kuchinjika uye hwakadzama tsika yemakambani.
Ipfupi nhoroondo yekusimudzira
Pakutanga, muna 1903, Lynde Bradley naDr.Stanton Allen vakashandisa mari yekutanga yemadhora chiuru kumisikidza iyo Compression Rheostat Kambani. Muna 1904, kambani yekutanga crane controller ine zita rekuti Allen-Bradley yakaendeswa kumusangano weSt. Louis muna 1904 kuti itore chikamu mukuratidzira, uye chigadzirwa cheRockwell chakabuda. Muna 1909, kambani yakachinja zita rayo kunzi Allen-Bradley Corporation ndokutamira kuMilwaukee. Dr. Allen anoshanda semutungamiri wenyika, Lynde Bradley anoshanda semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye mukuru wezvemari, uye Bradley anoshandawo semunyori-mukuru uye mukuru mukuru. Sezvo Allen-Bradley akatanga hofisi yekutengesa muNew York kekutanga, uye zvigadzirwa zvitsva zvine simba zvakanyanya zvakatangwa, kutengesa kwekambani kwakakwira gore negore, kunyanya "bradleystat" rheostat inoshandiswa mumagetsi ekudzora mapaneru uye epaneru redhiyo. Kurumbidza uye kupisa kutengesa kwave kuchitamba chikamu chakakosha chekambani.
1903: Musi waZvita 12, Linde-Bradley naStanton Allen vakagadzira iyo Compression Varistor Kambani uye vakatanga kugadzira zvigadzirwa zveAB. Muna 1909 yakanzizve iyo Allen Bradley Company.
1904: Batch yekutanga yevanodzora crane (mhando yeA-10 controller) yakaiswa mukugadzirwa muhuwandu hwakawanda yakatumirwa kuSt. Louis World Expo kuti vatore chikamu. Shure kwaizvozvo, kambani yakagamuchira yekutanga hodhi hombe ye -13-crane controllers, anokosha emadhora chiuru.
1917: Allen-Bradley ane vashandi zana nemakumi mashanu uye mutsetse wayo unogadzira unosanganisira otomatiki matangi uye maswitch, mabreak breaker, relays uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi. Hurumende inoraira panguva yeHondo Yenyika Yekutanga yakaunza kutengesa kwekambani kune zvisati zvamboitika.
1918: Julia Bolinsky anova mukadzi wekutanga mushandi paAllen Bradley chirimwa.
1920's: Musi waAugust 11, musangano wekutanga wekutengesa weAB wakaitirwa muMilwaukee. Musi waAugust 14, chiitiko chekutanga chevashandi chakarongwa nekambani chakaitirwa muMilwaukee Grant Park.
1924: Iko octagonal logo inova chiratidzo chekambani. Gare gare, izwi rehunhu rakanyorwa pa logo. Kutarisa pane mhando rave iro remakore-rekambani DNA-yemakore.
1932: Kushushikana kwepasi rose kwehupfumi kwakakanganisa kambani. Kuitira kurerutsa dambudziko, kambani yakaparura chirongwa chakakosha chekubhadharisa vashandi mari dzakarasika nemastock. Chirongwa ichi chakaitwa kwegore. Mukupedzisira, Alan Bradley akatenga ese masheya aine 6% yekufarira.
Muna 1937: Zviitiko zveR & D zvakaonekwa mukutanga kwema1930 zvakaburitsa hunyanzvi hwakawanda hwekugadzira uye zvigadzirwa, zvakakosha kwazvo zvaive zvekutanga coil starter yakaonekwa muna 1934 uye iyo thermoplastic resistor yakaonekwa muna 1935. Pakazosvika 1937, nhamba yevashandi vaAllen Bradley yakanga yasvika pre-kuderera padanho, uye kutengesa kwasvika rekodhi $ 4 mamirioni.
Muna 1943: Munguva yeHondo Yenyika Yechipiri, vashandi vekambani vakatsigira zvakashamisa kurwisa-fascist war, kambani yekutanga-yakawanda yekuzvidira yekupa ropa chiitiko chakaonekwa, uye vakatora chikamu muRed Cross nevakadzi kudzidziswa zvechiuto.
1954: Iyo Allen Bradley bhendi uye chorus timu yakakurumidza kukura kuita nyanzvi yekuita boka. Pamusoro pezve repertoires senge konzati yemasikati pamuzinda weMilwaukee, orchestra inoitirawo makambani mazhinji uye nharaunda. Muna 1954, nerutsigiro rweaive purezidhendi Fred Loock, orchestra yakatanga rwendo rwekutanga rwehushamwari kuUnited States neCanada. Hwerengedzo gumi nemaviri emitambo yakadaro yakaitwa.
1962: Musi waGumiguru 31, Harry Bradley akadzvanya switch pawachi yepamusoro yeAllen Bradley Building iri kuvakwa.
1964: Iyo yakakurumbira Allen Bradley Building yakapera uye ikava hofisi nyowani yekambani nenzvimbo yekutsvagisa.
1969: Allen Bradley akawedzera huwandu hwayo hwekugadzira kunze kweNorth America, uye yekutanga European base base, Allen Bradley UK Ltd., yakapedziswa muBletchley, England (yakazotumidzwa zita rekuti Milton Keynes).
1972: Musi waKurume 3, Allen-Bradley akatanga kupinda mune inverter bhizinesi kuburikidza nekutora.
muna 1980: Allen Bradley anoenda kune dzimwe nyika. Pakazosvika 1985, kutengeswa kwemusika wepasi rese kwaive ne20% yemari yekutengesa yekambani.
1985: Rockwell International yakawana Allen Bradley.
1988: Rockwell Automation yakagadza yekutanga chikamu muChina, Allen Bradley (Xiamen) Co., Ltd.
iro gore 1995
Rockwell International inowana Ryan Electric Company. Iko kusanganiswa kwaAllen Bradley naRyan Electric kunoita iyo ichangoburwa Rockwell Automation kambani inotungamira mumunda wefekitori michina. Iyo kambani yakawanawo iyo automation software department reICOM uye yakasimbisa Rockwell Software.
Gore 1999: Guta raAllen Bradley reMilwaukee, Wisconsin, rakava muzinda weRockwell International.
Gore 2001: Rockwell International Inc. yakaparadzaniswa neRockwell Collins uye ikachinja zita rayo kuva Rockwell Automation. Inotsigirwa nemhando dzinozivikanwa pasi rese-Allen Bradley, Ryan Electric, Dodge uye Rockwell Software sekambani yakazvimirira yeruzhinji.
Gore 2003: Rockwell Automation, iyo ine anodarika mazana mana ematavi munyika dzinopfuura makumi masere pasirese, ichaenderera mberi nekuedza zvisingaite kuti ive inonyanya kukosha kupa simba, kutonga uye mhinduro mhinduro kune vatengi.
gore 2004: Rockwell Automation bhizinesi kukura muna 2004 yakaratidza kuwanda kwemaviri manhamba, zvichiratidza kuti senge-yepasi rose maindasitiri michina nyanzvi, inoita basa rakakosha mukuvandudza kweChina yemusika musika.
-Nanjing uye Qingdao matavi akagadzwa
-Keith Northbush akashanyira China kekutanga sa CEO
-Continuous bhizinesi kukura mune maviri manhamba
-Pasi rose buritsa mufananidzo mutsva wechiratidzo: "Teerera. Funga. Gadzirisa ”(Teerera, rudo, uye shanda nesimba)
-Kuumbwa kwebazi muChengdu, guta hombe riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, zvinoratidza kuenderera mberi kwekudyara muChina uye danho rekuzvipira mukusimudzira kweSouthwest China
-Zhengzhou bazi rakavambwa
-Harbin bazi rakavambwa
-Vashandi vanopfuura chiuru muChina
-Iyo kuvakwa kwemahofisi makuru epasi rose eiyo indasitiri yekudzora switch bhizinesi muShanghai, zvichiratidza mutengi-centric musika zano
-Mnu. Ou Ruitao akashanda semaneja mukuru weChina, achitungamira timu yeChinese kusimudzira kukura kweChina
-Hangzhou, Jinan, uye Tianjin mahofisi emapazi akasimbiswa
-Rockwell Automation Kudzora Kubatanidza (Shanghai) Co, Ltd. yakavhurwa
-Rockwell Automation yakagadza makumi maviri neshanu yekutengesa nekushanda masangano muChina (kusanganisira Hong Kong neTaiwan), uye vanopfuura 1,500 nhengo dzechikwata dziri kushandira iwo musika weChina.
-Rockwell Automation (China) Co, Ltd. yakagadzwa zviri pamutemo